"Ary ny olona rehetra samy hanao araka izay inian'ny fony avy, tsy amin'alahelo na amin'ny faneriterena; fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra" - 2 Kor. 9:7,8.
Rehefa alefahin'ny fanatrehan'ny Fanahin'Andriamanitra ny fon'olombelona dia mora mandray ny bitsiky ny Fanahy Masina, ary tapa-kevitra handa ny tena sady hanao sorona noho ny asan'Andriamanitra. Rehefa mamiratra amin'ny hazavana sy hery tsy dia fahita firy ao anatin'ny efitry ny saina ny fahazavana avy any ambony vao ho resy ny fihetseham-po ao anatin'ilay olombelona mpanota. Izay koa vao voatohitra ny herin'ny fitiavan-tena ao am-po, ka taitra ny faniriana haka tahaka ilay ohatra, dia i Jesôsy Kristy izany, amin'ny asa fandavana ny tena sy ny fitiavana manolotra. Rehefa izany dia lasa malemy fanahy sy mangoraka ny mpanota very ny olona tia tena, ary manao voady matotra amin'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Abrahama sy Jakôba.
Manatrika ny fotoana toy izany ny anjelin'ny lanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny fanahy dia mandresy ny fitiavan-tena sy ny fitiavana izao tontolo izao. Izany mihitsy no miseho indrindra fa rehefa asehon'ilay mpiteny eo ambanin'ny Fanahy sy ny herin'Andriamanitra ny drafi-pamonjena narafitry ny Andrianan'ny lanitra, tao anatin'ny sorona teo an-kazo fijaliana. (...)
Nomen'Andriamanitra andraikitra hotanterahina ny olombelona eo amin'ny famitana ny famonjena ny olombelona namany. Afaka miara-miasa amin'i Kristy izy, amin'ny alalan'ny fanaovana asa be famindrampo sy fanasoavana. Saingy tsy afaka manavotra azy ireny kosa izy satria tsy mahavita mamerina amin'ny laoniny ny fahamarinana efa voaloto. Ny Zanak'Andriamanitra irery ihany no afaka nanao izany, tamin'ny alalan'ny fandaozana ny hajany sy ny voninahiny, sy ny nanafiany ny maha-Andriamanitra Azy tamin'ny maha-olombelona, ary ny nahatongavany tety an-tany mba hampietry ny tenany sy handatsaka ny rany ho an'ny taranak'olombelona. Rehefa niteny tamin'ny mpianatra i Kristy hoe: "Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra" - Mar. 16:15, dia ny asa fanapariahana ny Filazantsara no nankininy tamin'ny olona. Raha mandeha mitory anefa ny sasany, dia antsoiny kosa ny sasany mba hamaly ny antsony mahakasika ny ampahafolony sy ny fanatitra izay natao hanohanana ny asa fanompoana ary hanapariahana ny fahamarinana an-tsoratra maneran-tany. — TFC 4:470-472.